UMiguel de Unamuno kanye ne-anecdote yakhe njengothisha | Izincwadi Zamanje
Ngesinye isikhathi, ukuba UDon Miguel de Unamuno uprofesa wase-University of Salamanca washaya umnyango wendlu yakhe futhi umbhali Uvule umnyango wathola omunye wabafundi abebafundisa ngaphambi kwakhe, wabamema ukuba bangene endlini azophawula ngalokho okumlethele khona.
Uma usungaphakathi kwe- umfana omncaneNgaphandle kokukhathazeka, wamtshela ukuthi kufanele amcele umusa othile okhethekile.
Umfana wamazisa ukuthi wayengenalwazi ukuhlolwa YesiGreki u-Unamuno uqobo ayezomhambisa kuyona ngakusasa, kepha ukuthi ubaba womfundi wayezohamba ngalolo suku aye edolobheni laseSalamanca ngenkohliso yokubona olunye lwezivivinyo zendodana yakhe lapho wonke umndeni wawuthatha njenge-Hellenist enkulu.
Ukuze angaphoxi futhi aqhathe uyise, le nsizwa yabuza Unamuno ukumbuza isifundo esivunyelwene kusengaphambili, ukuze abukeke emuhle kuyise, bese embuza eminye imibuzo embalwa engeke ayiphendule ukuze uthisha amhluleke vele.
U-Unamuno wamukela futhi ngosuku lokuhlolwa wathi:
-Ngitshele i- isifundo ishumi nesikhombisa.
-Angazi, uthisha –Kuphendulwe umfana-.
U-Unamuno, onqikaza, waphendula ngezwi eliphansi:
- Akuyona yini i- ishumi nesikhombisa?
Futhi mfana, ngokuphelele ubuqotho wathi:
-Yebo, kepha yami ubaba.
Isithombe - Foroxerbar
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Abalobi » UMiguel de Unamuno kanye nomfundi oqotho